प्रधानमन्त्री ओली २३ चैतदेखि भारत भ्रमणमा – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित ९ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०१:४६
The Prime Minister, Shri Narendra Modi with the Prime Minister of Nepal, Shri K.P. Sharma Oli, in New Delhi on February 20, 2016.
उनले संविधानको सफलता सहमति तथा संवादमा निर्भर रहेको र सबैलाई साथमा लिएर अघि जान आग्रह गरेका थिए । ओलीले भारतसँग असमझदारी समाप्त भएको बताएका थिए । तर, भारतले नेपालको संविधानलाई स्वीकार गर्न नमान्दा र संविधान संशोधनबारे ओलीले उल्लेख गर्न असहमति व्यक्त गर्दा संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित भएको थिएन । तर, उक्त भ्रमणमा सात विषयमा सम्झौता भएको थियो ।
यी थिए सम्झौता
-भारतले भूकम्पपछि दिने करिब २५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान रकम सदुपयोगसमबन्धी सम्झौता
– तराई क्षेत्रका १७ वटा सडक पूर्वाधार बनाउने सम्झौता
-नेपाल संगीत तथा नाट्य एकेडेमी र भारतको संगीत नाटक एकेडेमीबीच समझदारी
– काँकडभिट्टा–बंगलाबन्द करिडोरमार्फत नेपाल र बंगलादेशबीच पारवहनका लागि आपसी पत्राचार आदनप्रदान
– सिंघाबाद र बिसाखापट्टनम बन्दरगाहसम्म रेल यातायात र सिंघाबादबाट बंगलादेश हुँदै नेपालमा रेल पारवहनका लागि भारतले सहयोग गर्ने सहमति
– मुजफ्फरपुर–ढल्केबर प्रसारण लाइनको संयुक्त उद्घाटन, भारतबाट नेपालमा ८० मेगावाट बिजुली थप
– नेपाल–भारत संयुक्त उच्चायोेगको निर्णयअनुसार भारतका सांसद भगतसिंह कोस्यारी, पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापक बिसी उप्रेती र प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा तथा नेपालका तत्कालीन सांसद राजन भट्टराई, पूर्वमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय र पूर्वकानुनमन्त्री नीलाम्बर आचार्य रहेको प्रबुद्ध समूह गठन
ओली–मोदी सम्बन्धका उतारचढाव
१७ असोजमा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता गर्ने लक्ष्यसहित चुनावी गठबन्धनको घोषणापछि भारतले ओलीसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न गरेको थियोे । निर्वाचनमा गठबन्धनले बहुमत ल्याउने र ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने आकलन दिल्लीको थियो । त्यसबीचमा दुवैतर्फबाट सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न भयो ।
भारतले कसरी फेर्‍यो अडान ?
ओली–मोदी सम्बन्धमा उतारचढाव
वाम गठबन्धनले पाएको जनमतपछि मोदीले ओलीसँग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयत्न गरे । स्रोतका अनुसार भाजपा महासचिव राम माधव, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले मोदीका तर्फबाट प्रयत्न गरे । ओलीका तर्फबाट नेताद्वय विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय शीर्ष नेतृत्वसँग सम्बन्ध सुधारका लागि निरन्तर प्रयत्न गरे ।
गत ६ पुसमा भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी दिल्ली गएर मोदी र ओलीबीच टेलिफोन वार्ताको तारतम्य मिलाए । ६ माघमा भने नेपाल डेस्क हेर्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव सुधाकर दलेलाको प्रयत्नमा मोदी र ओलीबीच पाँच मिनेट टेलिफोन वार्ता भयो।